Home Wararka Wasiirka Maaliyadda oo aan Xogaha Dhaqaalaha la Wada Wadaagin Xafiiska RW.
Xogaha kala duwan ee laga helayo wasaaradda Maaliyadda ayaa sheegaya inuu yar yahay xog is weydaarsiga ka dhaxeeya Xafiska RW Rooble iyo kan Beyle. Xog badan oo ay ahayd in lala wadaago xafiiska RW ayaan lala wadaagin iyadoo xogahaas toos loogu diro hay’adaha dhaqaalaha sida IFM iyo WB iyo xafiiska Madaxweynaha, waxaasa laga reebaa kan RW, taasina waxay keentay in wax badan oo uu la socon lahaa RW Rooble.
La socodsiin la’aantaas waxaa ka dhashay:
In mararka qaar oo aay la kulmayaan hay’adaha dhaqaalaha ay RW ka maqan yihiin xogo ay haystaan oo ay dooddoodu ku saleyn karaan
Inuu RW qaato go’aano aan habooneyn xogta ka maqan darted oo uu go’aan ku gaaro oo kaliya waxa uu xafiiskiisa ogyahay.
Inuu mar dambe ogaado khaldaad la joojin karay inta uusan heerkaan gaarin haddii mar hore lala wadaagi lahaa xogta.
Haddaba Agaasimaha Xafiiska RW waxaa laga rabaa inuu yahay qof aad ugu dhuun daloola fahamka, la sacodka iyo ka wargelinta RW waxa ka socda xafiisyada kala duwan ee wasaaradaha iyo hay’adaha dalka, si RW ay ugu fududaato inuu qaato go’aamo sax ah oo aan wajigabax ku ahayn xafiiskiisa, isaga iyo dalkaba.
Xafiisyo badan ayaan xogta la wadaagin xafiiska RW ama la wadaaga oo kaliya xog ay soo xuleen, taas oo keeneysa inuu RW go’anno ku gaaro xog kala dhiman. Cidda laga rabo inay la xisaabtanto wasiirada iyo agaasimayaasha guud ama taliyayaasha ciidamada waa agaasimaha xafiska RW. Sidoo kale RW Rooble waa inuu agaasime ka dhigtaa qof uu ku kalsoon yahay shaqadana ka adag.
Tusaale waraaqda uu qoray RW Rooble ee uu leeyahay waxaan ku joojiyey SDR waxay ahayd in lagu is ticmaalo RCF (Rabit Credit Fund) oo ah Sanduuq loogu talagay kabka miisaaniyadda.
Sidaas darted, Wasaaradda Maaliyadda waa inay xafiiska RW si joogto ah uga wargelisaa, Xafiiska RW waa inuu dib u eegaa haddii xogaha lala wadaagay laakiin aysan meel la iskaga xareeyn, waana in uu akhriyaa qof fahmi kara kana soo koobi kara waxa uu RW uga baahan yahay si uu wax uga yiraahdo xaalad u baahan in wax laga yiraahdo.
Dhinaca kale, RCF oo ah sanduuq deynta degdeg ah sidee loogu xiriirin kartaa mushaharka?. Waxaa loo baahan yahay in la sharaxo amaahdan degdegga ah ee RCF oo 22 milyan sidee lagu helay deyn ahaan. RCF waxaa la siiyaa dalka si looga kabo miisaaniyadda, waxayna tallaa Bangiga dhexe.
Halkaas waxaa ka cad in Beyle uu marin habaabiyay dadweynaha oo uusan runta RFC iyo sida loogu talagalay uusan sheegin. Tallabada ugu horreysa ee khaladka ah waa in uusan ku wargelin baarlamaanka in Wasaaradda Maaliyadda ay lacag ka qaadaneyso Bangiga Dhexe RFC si loogu dhellitiro miisaaniyadda gaar ahaan si loo daboolo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah iyo Ciidanka. Iydoo dhanka kalana uusan sheegin sida Wasaaraddu u bixin doonto amaahdaan degdeg ah. Arrinka seddexaad oo uu Beyle si ula kac u sameeyey ayaa ah inuusan ku wargelin golaha Wasiirada sida sanduuqan RCF uu ku yimid iyo ujeedada ay hay’adaha maaliyadda Somaliya ka kaalmeeya ay u abuureen.
Intaaan oo dhan waxay caddeynayaan in dalka uu baahan yahay in si daah furan uu RW gacanta ula galo hannaanka iyo hab raaca maaliyadeed ee dalka oo ku jira gacanta Beyle oo si mugdi ah waxyaabo badan u sameeyey. Waxaana loo baahan yahay in si hufan loo eego, loona diro Hantidhowrka guud inuu soo baaro in la raacay hannaanki lagu fulin lahaa deyn cafinta iyo heshiisyadii dalka lala galay .
Tusaale deyntaan degdeg ah waa in lagu celiyaa xisaabta Bangiga dhexe muddo 90 maalmood ah oo ku eg bilowga Oktober. Dhinaca Beyle iyo kooxdiisa Farmajo waxay dalbadeen $57m oo kale waana arrinta u baahan inuu RW fahmo kana hawlgalo inay jid sax ah ku timaado oo aysan dhaawicin deyn cafinta si saxna loo maamulo hadiiba ay jirto oo la helo.